Firiin isaa lakkoofsa guyyaa kan akka guyyaatti gulaalamuu danda'uu dha.Itti fufuun lakkoofsa guyyaa kan lakkoofsa murta'aa ta'ee tokko guyyaa hojiiwwaani jalqaba guyyaa irra adda kan ta'e.
Aduu Jalqaba guyyaa isa shallagin irraa hojjeetamu dha.Guyyyaan calqaba kunis yoo guyyaa hojii ta'e guyyaan kun shallaggii keessatti hammatama.
Guyyoota lakkoofsa guyyaa hojiiwwaaniti. Gatii firii aduu jalqabame poozetivi yommuu ta'u,kan osoo hin jalqabamin dura immoo neegativii ta'u.
Guyyaa Ayyaanaa tarree dirqala guyyaa ayyaanootati.Kunis guyyaa hojiin alaati. Bakka guyyaan ayyaanoota tokko tokkon eeramanitti,hangii man'ee galchi.
Mudde 1 bara 2001 guyyaa hojii guyyaa 17 booda guyyaa kamtu dhufa? C3 keessatti aduu calqaba galchi"2001-12-01" ,D3 keessa immoo lakkoofsa guyyaa hojiiwwaani galchi.Man'eewwaan F3 hanga J3 keessaa immo ayyaanoota qillee fi waggaa haaraa itti anuun dhufaan of keessaatti qabata."2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".